Wiase Nsɛm​—Nyarewa | Nyan! February 2015
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
Animdefoɔ akɔ wɔn anim wɔ nnuroyɛ mu, nanso yareɛ da so ara dosa nnipa. Na adanseɛ kyerɛ sɛ nyarewa pii wɔ hɔ a anka yɛbɛtumi akwati.
Ɛnnɛ, nnipa bɛboro ɔpepem 14 na wɔnya kokoram afe biara. Nanso Wiase Nyinaa Akwahosan Ahyehyɛdeɛ no de ato dwa sɛ ɛbɛdu afe 2035 no, na akɔ anim akɔdu ɔpepem 24. Wei kyerɛ sɛ, sɛ woyi nnipa a wɔnya kokoram afe biara no mu 10 si hɔ a, yɛbɛnya 7 abɛka ho. Nnipa yi mu pii wɔ hɔ a, ɔkwan a wɔfa so bɔ wɔn bra na ɛbɛma wɔanya yareɛ yi bi. Nsanom bebrebe, faakotena, sigaretnom, ne kɛseyɛ bɛtumi akɔfa saa yareɛ yi aba.
Berɛ a Britain aban nyaa adanseɛ bi a ɛkyerɛ sɛ nantwiyareɛ bi a wɔfrɛ no mad cow disease bɛtumi asane nnipa no, wɔtuu badwafoɔ ma wɔyɛɛ nhwehwɛmu. Nea enti koraa a na nhwehwɛmu no ho hia ne sɛ na abɛtɔ dwa sɛ, sɛ wɔtwe obi mogya ma onipa foforɔ a, ɛbɛtumi ama wanya yareɛ no bi. Mmarahyɛ Badwani bi a ɔde Andrew Miller kaa sɛ: “Asɛm yi ha adwene paa, efisɛ ɛbɛsi nnɛ yɛnnyaa yareɛ no ano aduro, enti sɛ ɛtumi sane nnipa a, ɛnneɛ na ɛyɛ aniberesɛm. Yɛate sɛ sɛ obi gye mogya anaa obi honam akwaa bi a, ɔbɛtumi anya yareɛ no bi.”
Nhwehwɛmu bi a wɔyɛɛ wɔ Norway daa no adi sɛ, sɛ obi nya adwenemhaw a, ɛnyɛ den koraa sɛ ɔbɛnya akomayareɛ. Adɔkotafoɔ a wɔde asɛm yi too dwa no de mfie 11 na ɛyɛɛ Norwayfoɔ bɛyɛ 63,000 mu nhwehwɛmu. Europa kuo bi a ɛhwɛ akomayareɛ kaa sɛ wɔn a wɔyɛɛ nhwehwɛmu no baako de too dwa sɛ adwenemhaw tumi kanyan biribi wɔ nipadua no mu a ɛma obi nya akomayareɛ. Nanso ɔkaa sɛ biribi foforɔ nso wɔ hɔ. Ɛne sɛ adwenemhaw bɛtumi ama ayɛ den ama ɔyarefoɔ no sɛ ɔbɛdi akwankyerɛ akyi na ne ho atɔ no.
Sɛ obi nom sigaret a, ne nsõ ne aseɛ mporoporowa no bɛtumi aka afoforɔ akwahosan. Wei enti nyansahufoɔ reyɛ nhwehwɛmu ahwɛ sɛnea asiane no kɛseɛ teɛ. Sigaret ho nsõ ne aseɛ mporoporowa ahyeta baabiara. Wobɛhu bi wɔ fam, apono so, nkurɔfoɔ fie, ahɔhodan, ne kar mu. Wɔkyerɛ sɛ, sɛ ɛgu hɔ kyɛ a, na ano reyɛ den.
“Anigyeɛ akoma sa yareɛ; honhom a abotoɔ ma nnompe mu wewe.”—Mmebusɛm 17:22.